Madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas maxaa lagu xasuusan doonaa? – Radio Daljir
Madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas maxaa lagu xasuusan doonaa?
Janaayo 14, 2019 4:27 g 0
Wax badan baa Gaas lagu xasuusan doonaa, mana aha kuwo qurxoon! Laakiin xasuus waxaa ugu fiican mid xun oo inta laga gaaray la buriyey.
Oo haddana xasuustu waa kala jaar e aan labo ugu hormarino: Waa midda koowaad e waxaa lagu xasuusan doonaa hadalkiisii Toronto sannadkii 2016 asaga oo la hadlaya buslahada reer Puntland ee Toronto, Kanada, uu ku yiri, “Puntland waa laga soo tagay. Kuwii aqoonta lahaa waa soo tageen. kuwii dhaqaalaha haystay waa soo tageen. Qofkii baxsan karay waa soo baxsaday. Waxaa isugu haray intii fakhriga ahayd. Intii aan waxba haysan. Intii aan aqoonta lahayn.”
Hadalkaas inta laga gaaray oo uu buray baa reer Puntland oo si toos ah ugu jawaabaya Gaas waxa ay doorteen Madaxweyne daljoog ah oo Puntland aan maalin meelna uga dhaqaaqin, aan fakhri diloon, aqoon leh, oo wax kasta oo u lahaa ama haysteyba la qaybsaday bulshada reer Puntland iyo waliba Soomaali oo dhan.
Waa marka xiga e, BARAFASOORKII dhaqaalaha iyo nidaamka canshuuraha ka soo bartay dalka Mareykanka, Jaamacad Mareykanka ku taalana wax ka dhigi jirey waxaa lagu xasuusan doonaa in asaga oo Madaxweyne Puntland ah uu Puntland keensaday mashiin daabaca lacagta been-abuurka ee Shilinka Soomaaliga. Mashiinkaas maalinka Gaas uu Puntland keenay sarrifka halka doolar (1 USD) waxa uu ahaa ShSo 22,000. Maalin kahor maalinkii doorashada Puntland sarrifka doolarku waxa uu marayey ShSo 37,000. Heerka dhaqaale burbur ee mashiinkaas uu bulshada Puntland gaarsiiyey Gaas ma aha e inta kale reer Puntland ma mooga, mana moogaan doonaan.
Moogaan iyo sicirbarar aan hore loo arag kaliya ma aha e, Gaas waxaa lagu xasuusan doonaa in maanta oo taariikhdu tahay 14 Janaayo 2019, uu Madaxweynihii la doortay ee daljoogta ahaa uu soo saaray wareegto lagu mamnuucayo mashiinkii daabacaadaha lacagaha faalsada ee Madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas.
Wareegtooyinku waa kala labo e, wareegto waxaa ugu daran tan Gaas oo weli taagan inta xilkii wareejiyey warka ugu horreeyaa uu yahay “Madaxweyne Deni oo joojiyey in la daabaco lacagta Shilin Soomaaliga.” Wareegtadaas maanta waxaa uu Madaxweyne Deni ku sababeeyey mid loogu talagalay “si kor loogu qaado nolosha shacabka reer Puntland iyo la dagaalanka sicirbararka.”
Deni waxa uu ahaa daljoog mana moogayn waxa dalka ka jira.
Xusuusuhu kala daran e xasuus xun waxaa ugu roon tan dawo loo helo. Laakiin waxaa jira kuwo aan weli dawo loo helin, illaa loo helana lagu xasuusan doono Madaxweyne Gaas iyo intii masuulka ka ahayd ammaanka shacabka Puntland.
Madaxweyne Gaas waxaa lagu xasuusan doonaa in dhulkii Puntland qayb kamid ah la qabsaday intii uu Madaxweynaha ahaa. Waxaa lagu xasuusan doonaa in uu maalin cad xabsiyada Puntland ka siidaayey rag argagixiso ah oo toogasho ku xukuman, oo lagu caddeeyey in ay laayeen nindoorkii Puntland, uuna safka hore uga jiro Cabdirisaaq Xuseen Tahliil (Ina Calool Geel), soo qabashadiisana lala kaashaday ciidamada dowladda Mareykanka.
Madaxweyne Gaas waxaa lagu xasuusan doonaa magaaladii ganacsiga Puntland ee Bossaso oo ay canshuurta ka aruursadaan Daacish iyo al-Shabaab, ganacsadihii diidana maalin cad la dilo ama uu dalka ka cararo. Waxaa lagu xasuusan doonaa in dhammaan raggii uu ku ogaa ammaanka Puntland mid walba oo kamid ahi uu isu sharraxay Madaxweyne Puntland ama Xildhibaan.
Madaxweyne Gaas intii uu madaxweynaha ahaa waxaa lagu xasuusan doonaa tayoxumida wasiiradiisa iyo sida wasiir walba oo maanta Gaas la jabay uusan maalin karti u yeelan in uu soo horfariisto warbaahinta xorta ah, aan ka aheyn halgamaa Wasiir Qarjab.
Madaxweyne Gaas waxaa lagu xasuusan doonaa musuq kii ugu xumaa oo ka hanaqaaday Puntland shantii sano ee uu Madaxweyanaha ahaa iyo sida loo boobay dhulkii dowladda Puntland.
Taariikhda iyo tayoxumida Madaxweyne Gaas ee Puntland liiday ma aha mid maalin looga bogan karo, laakiin aan maanta ku gunaanadno in Madaxweyne Gaas lagu xasuusan doonaa been, ballan been ah, iyo been tii ugu darnayd ee taariikhda Puntland looga barto masuul dowlo.
Warka Fiidnimo iyo Xasan Heykal, Daljir Bosasso (dhegayso|daawo)
Boosaaso Shacabku waxay khaati ka taganyihiin dhalinyaradda mobelka furta (dhegayso)